Ederede Arvind Parthiban na Martech Zone |
Edemede site na Arvind Parthiban
Arvind bụ onye isi na ngalaba-onye guzobere Zarget, ebe na mgbakwunye na ịkọwapụta ọhụụ ụlọ ọrụ na ịkọwapụta ihe ọ ga-eme iji mezuo ebumnuche ha, ọ na-ahụ maka ire ahịa ngwaahịa, ọrụ ịre ahịa na ahịa. Onye bụbu onye ọrụ Zoho ebe ọ na-aga ahịa ngwaahịa maka ITSM nke ngwaahịa flagship, Arvind nwetara nghọta bara uru na ụlọ ọrụ SaaS na 'Marketing' ihe niile. Arvind na-enweta site na ahụmịhe ya bara ụba iji mee ka ngalaba azụmaahịa na-aga n'ihu. Ọ bụkwa onye na-anụ ọkụ n'obi nke Chelsea.
Fraịde, Machị 30, 2018 Tọzdee, Nọvemba 5, 2020 Arvind Parthiban
Na oge dijitalụ a, agha maka ohere ịzụ ahịa agbanweela n'ịntanetị. Site na otutu ndi mmadu na ntaneti, ndenye aha na ire ahia esiwo na uzo ochie ha gaa na nke ohuru ha. Ebe nrụọrụ weebụ ga-adị na egwuregwu kachasị mma ha ma leba anya na atụmatụ saịtị na ahụmịhe onye ọrụ. N'ihi ya, ebe nrụọrụ weebụ abụrụla ihe dị mkpa maka ego ụlọ ọrụ. N'iburu ọnọdụ a, ọ dị mfe ịhụ etu njikarịcha ntụgharị mgbanwe, ma ọ bụ CRO dị ka amaara ya